Tirada kiisaska Cudurka Coronavirus ee Caalamka oo kor u dhaaftay 700,000 kiis – Geelle Magazine
Tirada kiisaska Cudurka Coronavirus ee Caalamka oo kor u dhaaftay 700,000 kiis
caliahmed Posted On March 30, 2020
In ka badan 700,000 oo ah kiisas la xiriira cudurka Coronavirus ayaa laga xaqiijiyey wadamada caalamka oo dhan, tan iyo markii uu bilowday faafitaanka caalamiga ah ee fayruskan, sida ku cad xog uururin ay sameysay wakaaladda wararka ee AFP.
Kiisaska ayaa hadda gaaraya ugu yaraan 715,204, oo ay ku jiraan dhimashada 33,568 qof, iyada oo cudurkana uu gaaray 183 dal oo ka mid ah caalamka.
Dalka laga xaqiijiyey kiisaska ugu badan ayaa ah dalka Mareykanka, oo cudurka uu ku haleelay in ka badan 143,00 oo qof, oo 2,514 ka mid ahna ay u geeriyoodeen.
Dalka kusoo xiga waa Talyaaniga oo laga xaqiijiyey 97,689 kiis. Talyaaniga ah ayaa dalka laga diiwaan-geliyey dhimashada ugu badan, oo gaareysa 10,779 qof.
Dalka Shiinaha oo ah halka markii ugu horreysay cudurkan uu kasoo if baxay dabayaaqadii bishii December ee sanadkii hore, ayaa laga diiwaan-geliyey 81,470 kiis iyo dhimashada 3,304 qof, inkasta oo dalalka qaar ay su’aalo ka keeneen tiradaas, iyaga oo sheegaya in Shiinaha ay daboolayaan xaqiiqda tirada rasmiga ah.
Soomaaliya ayaa diiwaan-gelisay seddex kiis oo laba ka mid ah laga helay muwaadiniin dibedda kasoo laabtay, halka kan seddexaadna uu yahay qandaraasle la shaqeeya Qaramada Midoobay.
Tiradan 715,204 ayaa ah kaliya qeyb yar oo ka mid ah dadka cudurka uu haleeley, maadaama tijaabada lagu sameynayo oo kaliya dadka isku arkay calaamadaha cudurkan, waxaana la rumeysan yahay in ay jiraan dad badan oo iyaga oo aan la baarin cudurka inta uu ku dhacay hadana ka bogsooday.
Faah Faahin: Gudoomiyihii Gobolka Mudug AUN oo ku geeriyooday Qarax ka dhacay Galkacyo.
ahmedzaki May 17, 2020
Axmed Madoobe oo ka qayb galay Shir ay soo qaban qaabisey QM.
ahmedzaki May 18, 2020
Sawiro:-Mas’uuliyiin ka qeyb gashay Aaska Guddoomiyihii Gobolka Nugaal